बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका- Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ठूलाे मात्रामा विष्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ
प्रहरी महानिरीक्षक खनालद्वारा अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. आशा सिंहलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
पाँच हजार घुस सहित प्रहरी जवान पक्राउ
सापकोटालाई सभामुख नबनाउन अपिल
सुदूरपश्चिम प्रदेश : अतिक्रमणको चपेटामा वन
गृह, अर्थसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा सचिव रिक्त हुँदै
काठमाडौं । 'कविता, जिन्दगी हो । जिन्दगी, कविता हो । कविताको सेलिब्रेसन, जिन्दगीको सेलीब्रेसन । आउनुहोस् ! कविता र जिन्दगीको यो ककटेल स्वादमा मस्त हुँदै शब्दहरूको जबर्जस्त सेलिब्रेसन गरौँ' भन्ने मुलभाव
जिउधनको सुरक्षा पाऊँ: मिलन, कुटेकोमा मलाई पछुतो छैन: मनाङे
पोखरा । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङले गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे) विरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। अध्यक्ष गुरुङले मनाङेविरूद्ध जिल्ला प्रहर
फायल तस्वीर काठमाडौं । धादिङमा युवाहरुबीच ग्याङ फाइट हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । धादिङको खनियावास गाउँपालिका ४ दार्खा घाम्सामा युवाबीच झडप भएको थियो । मंगलबार राती स्थानिय युवाहरुबीच झडप भएको स्था
राष्ट्रपति ट्रम्पको हत्या गर्नेलाई तीन मिलियन डलर पुरस्कार : इरानी नेता हमजेह
एजेन्सी । इरानका एक नेताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हत्या गर्ने जो कसैलाई पनि ३ मिलियन डलर इनाम दिने घोषणा गरेका छन । केन्द्रीय कर्मान प्रान्तका संसदीय सभापति अहमद हमजेहले भने, हामी ट्रम्प
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा खसेको सुक्खा पहिरो पन्छाइएपछि सडक सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिका–६ तुइन खोलामा मङ्गलबार राति सुक्खा पह
काठमाडौं । 'कविता, जिन्दगी हो । जिन्दगी, कविता हो । कविताको सेलिब्रेसन, जिन्दगीको सेलीब्रेसन । आउनुहोस् ! कविता र जिन्दगीको यो ककटेल स्वादमा मस्त हुँद
काठमाडौं । 'कविता, जिन्दगी हो । जिन्दगी, कविता हो
नगद सहित ९ जना जुवाडे पक्राउ
एजेन्सी । चीनले शुक्रबार ताइवान स्ट्रेटको माध्यमबा...
सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड नाफा कमाउँदा अर्को नेपाल टेलिकमले भने ९ अर्ब ७६ करोडमात्र नाफा कमायो । निगमले अघि...
डडेल्धुरा । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले डडेल्धुरा अस्पतालको आज निरीक्षण गरेका छन् । सो अवसरमा उनले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, जनशक...
एजेन्सी । इरानका एक नेताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हत्या गर्ने जो कसैलाई पनि ३ मिलियन डलर इनाम दिने घोषणा गरेका छन । केन्द्रीय कर्मान प्र...
थनबर्ग र ट्रम्प आमुन्नेसामुन्ने, जलवायु परिवर्तन र वातावरण मुख्य मुद्दा
इन्टरपोलका पूर्व अध्यक्ष मेंगलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा साढे १३ वर्ष जेल
गृहयुद्धमा बेपत्ता भएकाहरुको मृत्यु भइसक्यो– राष्ट्रपति राजापाक्षे
बगदादमा अमेरिकी दूतावास नजिकै रकेट अवतरण, इराकमा फेरि अशान्त
रहस्यमय ‘कोरोना भाइरस’ चीनमा तेब्बर गतिमा फैलिँदै,
इन्डोनेसियामा पुल भत्किँदा सातको मृत्यु